Kulan Ku Saabsan Amaanka oo Dhexmaray Maamulka Puntland iyo Xarumaha Waxbarashada Bosaaso(Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Kulan Ku Saabsan Amaanka oo Dhexmaray Maamulka Puntland iyo Xarumaha Waxbarashada Bosaaso(Sawiro)
Kulankaan ay galabta wada qaateen maamulayaasha Iskuulada magaalada Bosaaso iyo Wasiirka Amniga Dowlada Puntland Jeneraal Yuusuf Axmed Kheyr ayaa waxaa uu galabtaÂ ka dhacay Xarunta Machadka Caafimaadka ee Bosaaso,waxaana goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha Waxbarashada gobolka Bari Maxamuud Caynab,Agaasimaha Wasaarada Amniga Cali Maxamed Hayaan iyo martisharaf kale.
Dhegayso Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Bari Caynab[powerpress: url=”https://horseedmedia.net/audio/caynab.mp3″]
Gudoomiyaha Waxbarashada gobolka Bari Maxamuud Caynab oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in kulankaan uu yahay mid muhiim ah oo ay kasoo qaybgaleen ilaa 12-iskuul maamuleyaashooda,wuxuuna tilmaamay in ujeedka laga leeyahay ay tahay sidii loo xoojin lahaa amaanka guud ee magaalada.
Wuxuuna sheegay in bulshada ku nool magaalada Bosaaso looga baahanyahay in ay ka qayb qaatan sugida arimaha amaanka isla markaana dhowaan ay bilaabman doonaan imtixaanada kama dambeysta ee iskuulada loogana baahanyahay maamulka gobolka iyo Laamaha Amaanka ay gacan ka geystaan.
Agaasimaha guud ee Wasaarada Amniga Dowlada Puntland Cali Maxamed Hayaan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhamaan dadka ku nool Puntland ay waajibaad ka saarantahaya in ay ilaashadaan amaankooda isla markaana soo dhoweeya dadka kale ee kasoo cararaaya dagaalada ka socda gobolada Koonfureed.
Wasiirka Amniga Dowlada Puntland Jenraal Yuusuf Axmed Kheyr ayaa xusay in bulshada ku nool magaalada Bosaaso looga baahanyahay in ay ogaadan dadka samaynaaya falalka amaan darada ah ayna la shaqeeyaan Ciidanka Amaanka si looga hortago.
Dhegayso Wasiirka Amniga oo kulanka ka hadley [powerpress]
Qaar ka mid ah Maamuleyaasha ka hadashay goobta ayaa sheegay in ay diyaar u yihin in ay maamulka iyo Ciidanka kala shaqeeyaan arimaha amaanka.